Akanjo an'ny charros na mariachis ary ny fomban-dry zareo | Vaovao momba ny dia
Akanjo charro na mariachis: fomban-drazana meksikana
Maria Jose Roldan | | America, Mexico DF
Raha te hianatra momba ny fitafian'ny charros sy mariachis isika dia tsy maintsy ho fantarintsika aloha izay momba azy ireo. Ny mariachi dia tandindon'i Mexico ary ireo olona manolo-tena ho mariachis dia manao izany amin'ny avonavona sy fandavan-tena tanteraka. Na dia avy amin'ny fanjakan'ny Jalisco aza izy ireo, androany dia afaka mankafy ny mozikan'izy ireo na aiza na aiza ao amin'ny firenena, ary mora fantarina ihany koa izy ireo noho ny fitafiany, ny satrony malalaka misy molotra lehibe ary ny amboradara charro amin'ny fitafiany.
Ny mariachi dia maheno matetika amin'ny fankalazana Meksikana ary ity karazana ity dia nanampy tamin'ny lazan'ireo mpilalao sarimihetsika. Mariachis dia fomba fanao meksikana izay tian'ny olona rehetra ary raha mandeha any Mexico ianao dia azoko antoka fa te hihaona ianao.
1 Akanjo taloha
2 Ny niandohan'ny charros
3 Misy Mariachis ve any Mexico?
4 Ny fahalianana momba ny fitafian'ny mariachis
5 Ny niandohan'ny mariachis
6 Fitaovana Mariachi
7 Mozika Mariachi
8 Mariachis anio
Tamin'ny voalohany dia nanao akanjo fanaon'ny Jalisco ambanivohitra ny mariachis ary bodofotsy vita amin'ny landihazo sy mololo misy ravina palma ho satroka izy ireo, saingy taty aoriana dia nanomboka nitafy ilay "charro" izay zanak'omby, toy ny mpitaingin-tsoavaly. Ny akanjo ofisialin'ny "charro" dia vita amin'ny palitao fohy sy pataloha mainty matevina, fa ny mariachis koa dia nanisy fiovana miaraka amin'ny fotsy ao amin'ilay akanjo.
Ny niandohan'ny charros
Ny akanjo charro dia inoana fa niavy tao amin'ny tanànan'i Salamanca, tanàna Espaniola, satria ny mponina dia nantsoina hoe "charros". Amin'ity faritany ity, ny renirano Tormes sy Ciudad Rodrigo dia faritra antsoina hoe Campo Charro, ary amin'ity faritra ity ny akanjo mahazatra dia ny an'ny koboy mainty, miaraka amin'ny palitao fohy sy baoty mitaingina. Ireo satroka nampiasaina, izay tena nitovy tamin'ny an'i Mexico, dia nanana elatra kely kokoa, fa ny mitovy kosa dia mahatalanjona.
Misy Mariachis ve any Mexico?
Ny zava-misy dia izao ianao dia mahita an'i Mariachis any amin'ny firenena maro any ivelan'i Mexico toa an'i Venezoelà, izay toerana ananan'izy ireo laza malaza koa. Any Etazonia dia betsaka ihany koa ny andian-jiolahy noho ny fahamaroan'ny mpifindra monina Meksikana izay nanapa-kevitra ny hifindra hipetraka ao. Any Espana dia malaza be koa izy ireo satria azo atao ny mahita vondrona any amin'ny tanàna samihafa milalao sy mihira hira mahazatra, mihoby eny an-dalambe ao an-tanàna.
Ny fahalianana momba ny fitafian'ny mariachis
Raha te-hahita ireo akanjo mahazatra any Mexico isika, araka ny efa nolazaiko tetsy ambony, dia tsy maintsy manomboka amin'ny fahafantarana ny akanjo misimisy indrindra eto an-tany ianao: ny fitafian'ny Charro (koboy Meksikana) izay mankafy antsika amin'ny mozika mariachi, izay avy amin'ny fanjakan'ny Jalisco, toerana malaza indrindra amin'ny tequila. Mampiasa tantara isika, ho tsapantsika fa amin'ny fiandohan'ny taonjato faha-XNUMX, ny akanjo charro, miankina amin'ny hoe avy aiza ny hacienda, miovaova loko, endrika, fitaovana ampiasaina, ankoatry ny hafa.
Ireo izay manam-bola bebe kokoa dia manao palitao vita amin'ny volon'ondry, misy firavaka volafotsy, ary ilay tena nanetry tena dia nitafy akanjo lava. Taorian'ny Tolom-piavotana Meksikana dia namboarina ho an'ny rehetra ny akanjo, eo ambanin'ny hatsaran-tarehy barozy. Androany, ny akanjo charro, izay somary miovaova arakaraka ny tranga, dia misy palitao kanto, pataloha tery sy milamina (izay mampirongatra ny vehivavy sasany), lobaka iray, kiraro kitrokely ary karavato. Ireo dia tokony hifanohitra amin'ireo fret, sy firavaka volafotsy hafa (na fitaovana hafa). Ny baoty dia tsy maintsy lokon'ny lasely, ary tantely na volontany, raha tsy atao amin'ny fandevenana, izay ho mainty. Ny lobaka ampiasaina dia tsy maintsy fotsy, na fotsy fotsy.
Ny tena misongadina indrindra dia ny satroka, izay vita amin'ny volon'ondry, volon'ondry na fitaovana hafa. Izy io dia miaro ny charros amin'ny masoandro meksikanina, ary miaro azy ireo amin'ny fianjeran'ny soavaly. Tsara ny manonona izany Tsy akanjo mora vidy izy ireo satria ny mora indrindra dia mitentina 100 $.
Ny niandohan'ny mariachis
Tsy mora ny mamantatra ny niandohan'ny mariachi. Ny mariachi dia fitambaran'ny fivoarana ara-kolotsaina nitranga nandritra ny taonjato farany na tany Mexico. Na dia ny foko vazimba teratany Meksika aza dia manao mozika miaraka amin'ny sodina, amponga ary kiririoka, tsy misy fifandraisana mazava eo amin'ny mozika vazimba sy mariachi.
Ireo zavamaneno nampiasain'ny mariachi tany am-boalohany niaraka tamin'ny akanjon'izy ireo dia natolotry ny Espaniôla: lokanga, gitara, vihuelas, valiha, sns. Ireo fitaovana ireo dia noheverina fa nampiasaina nandritra ny besinimaro, fa ny criollos (Meksikana manana razambe Espaniôla) dia nanomboka nampiasa azy ireo mba hanao mozika malaza (ho tezitra ny pretra satria nampiasaina niaraka tamin'ny andininy manesoeso, manesoeso na manohitra ny andininy ny vanim-potoana).
Miroborobo ny mozika Mariachi noho ireo olona tia izay henony, ny crillos tamin'ny taonjato fahasivy ambin'ny folo dia nanao izay rehetra azo natao mba hampitsaharana ny soritry ny fisian'ny Espaniôla any Mexico ary raha nanao izany dia nanohana mozika mariachi ry zareo.
Mariachis dia afaka mitafy akanjo nentin'ireo mpiasa nentin-drazana, pataloha fotsy, lobaka ary satroka mololo, fa rehefa nivoaka izy ireo mba hitady asa ho mariachi dia afaka mahazo mihoatra ny mpiasa antonony eo amin'ny fiaraha-monina izy ireo. Na dia tsy mankafy ny toerany sahala amin'ny am-polony taona maro lasa aza ny mariachis, ny tena izy dia mbola sarobidy tokoa izy ireo ary mitafy ny akanjon'izy ireo ary mihira ny hirany am-pireharehana sy fahasambarana lehibe.
Ny mariachis, ny mozikan'izy ireo ary ny fitafiany dia fantatra manerana an'izao tontolo izao tsy any Mexico ihany, amin'ny toerana toa an'i Eoropa, Japon na faritra hafa eto amin'izao tontolo izao. Ity endrika kolontsaina sy tantara malaza any Mexico ity, Ankalazaina isaky ny septambra izay niandohan'ny zavatra rehetra: any Jalisco.
Manomboka izao raha tsy fantatrao hoe iza ireo mariachis, ny kolontsain'izy ireo sy ny fitafiany, dia azonao atao izao. Te hahita azy ireo velona izao ve ianao? Seho tsara izay tianao ny mankafy!
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Vaovao momba ny dia » tanàna » Mexico DF » Akanjo charro na mariachis: fomban-drazana meksikana
Ahoana no ahatongavana any Boracay? Làlan-drivotra, ranomasina ary lalan-tany
Ny fahaterahan'ny faharavan'i Pompeii